धेरै खतराबाट राज्य मा महिला प्रतीक्षा मा झूठ। र ती सबै भन्दा, oddly पर्याप्त, गर्भावस्था को परिणाम हो। साँच्चै, यो अवधिमा महिला शरीर को काम पूर्ण पुनर्निर्माण छ, र प्रतिरक्षा प्रणाली जो अन्य अङ्गहरू र प्रणाली मा अतिरिक्त तनाव गराउँछ, कमजोर हुन्छ। साथै, भविष्यमा आमाहरु आफूलाई ज्ञात वा चाहे त्यो नयाँ रोगहरु गर्न सजिलै कमजोर हुनेछ गरे छैन भनेर पुरानो चिकित्सा अवस्था worsen गर्न सक्नुहुन्छ। केही अवस्थामा, गर्भावस्था को समयमा एन्टिबायोटिक को सफल रिकभरी लागि आवश्यक हो।
यस्तो otitis मिडिया, गलसुआशोथ, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस वा एन्टिबायोटिक संग केवल उपचार कुनै पनि अन्य संक्रामक रोग जस्ता रोगहरु। ती सबै गर्भावस्था को समयमा थप गम्भीर, तत्काल उपचार आवश्यकता। दुर्भाग्यवश, तिनीहरूलाई छुटकारा प्राप्त गर्ने अन्य तरिकाहरू सम्भव छैन, कम्तिमा मिति छ। तर धेरै आमा अनुभव - गर्भावस्था कि एन्टिबायोटिक ग्रस्त पछि। यो हामी यस लेखमा छलफल गर्नेछौं के छ।
सूक्ष्मजीवहरु synthesize कि जैविक मूल भनिन्छ एंटीबायोटिक दबाइहरु जीवाणु वृद्धि मार्न सक्ने क्षमता छ। गर्भावस्था को समयमा सबै एन्टिबायोटिक सुरक्षित र प्रयोग गर्न सुरक्षित गर्न सकिँदैन छैन। आखिर, तिनीहरू, आफ्नो मुख्य प्रत्यक्ष र जीवाणुरोधी कार्य बाहेक छन् एलर्जी प्रतिक्रिया वा अन्य साइड इफेक्ट हुन सक्छ - टाउको दुखाइ, कब्जियत वा वाकवाकी। लागूऔषधको प्रभाव, सजिलो नैदानिक परीक्षा को आचरण धन्यवाद भविष्यवाणी।
के गर्भावस्था को समयमा सबै महिला लागि एन्टिबायोटिक बारेमा जान्न महत्त्वपूर्ण छ
नियम, सबै डाक्टर कुनै पनि दबाइ, विशेष गरी एन्टिबायोटिक प्रयोग नगर्न सल्लाह छन्। आखिर, तिनीहरूले placenta र प्रभाव यसको विकासको लागि स्वाभाविक नकारात्मक मार्फत भ्रूण गर्न भित्र पस्नु गर्छन।
तिनीहरूलाई के गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ बिना अवस्थामा हामी सम्म पछि सम्झना गर्नुपर्छ गर्भावस्था को 12-16 सप्ताह तिनीहरूलाई खराब लिन। साँच्चै, यो अवधिमा, सक्रिय भ्रूण को सबै प्रणाली र अंगहरु गठन, र यसको अन्त्य सबै मुख्य मनपर्ने पूरा गर्दै हुनुहुन्छ। 3-3.5 महिना पछि, गर्भावस्था को समयमा केही एन्टिबायोटिक विशेष, प्रयोग गर्न भ्रूण मा एक हानिकारक प्रभाव छैन कि भन्ने अनुमति छन्। इच्छित उत्पादन, व्यक्तिगत डाक्टर आवश्यक छ नजन्मेको बच्चाको मा आमा र सम्भव प्रभाव को शारीरिक विशेषताहरु खातामा लिएर।
केही नकारात्मक प्रभाव एकदम सम्भव छ हुनत धेरै अध्ययन, एक वंशानुगत (आनुवंशिक) मिसिन मा धेरै लागूऔषधको कुनै प्रभाव देखाएका छन्। ampicillin, amoxicillin, र यति मा - safest एन्टिबायोटिक एक रोगनाशक ओषधि छ। कि समूहमा सबैभन्दा उपयुक्त र सुरक्षित दबाइ - रोगनाशक ओषधि।
sepsis, मूत्र संक्रमण र गंभीर निमोनिया: - Cephalosporins cefotaxime, cefazolin र अरूलाई आफ्नो सम्भव विषाक्त प्रभाव बावजुद, जीवन खतरामा पार्ने र गम्भीर संक्रमण लागि आवश्यक छन्। धेरै अन्य एन्टिबायोटिक गर्भावस्था को समयमा पनि "नातेदार" सुरक्षा हुन सिद्ध छ। उदाहरणका लागि, जो azithromycin, इरिथ्रोमाइसिन प्रतिनिधिको त्यसैले हो, र macrolides, को समूह। तत्संबंधी बरु आशावादी प्रयोग डाटा।
तिनीहरूले हड्डी, दाँत र जीवाणुहरू गर्न भ्रूण को विकास मा एक हानिकारक प्रभाव, साथै कारण क्षति हुन सक्छ किनभने अन्य एन्टिबायोटिक लिइरहेको देखि, categorically इन्कार गर्नुपर्छ श्रवण को अंग। aminoglycosides र tetracyclines सबैभन्दा खतरनाक समूह।
आधुनिक चिकित्सा, एन्टिबायोटिक धेरै मान्छे को जीवन विस्तार गर्न मद्दत गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपकरण मानिन्छ। वास्तवमा, आफ्नो मद्दत उपचार बिना धेरै रोगहरु असम्भव। आफ्नो डाक्टर तपाईं एन्टिबायोटिक निर्धारित छ भने त नडराऊ। सम्झना, गर्भावस्था को समयमा प्रयोगको रोग को थप नकारात्मक परिणाम सम्भावित साइड इफेक्ट तुलनामा भने मात्र जायज छ।
को छाती मा पैड: कसरी चयन गर्ने?
योटरिनबर्गमा सस्तो होटलहरू: समीक्षा, विवरण र पर्यटकहरूको समीक्षा
जिन्जरब्रेड-कुखुरा - कुनै पनि अवसरको लागि एक व्यवहार!
डिजिटल मुद्रण चयन मुद्रक जेरक्स DocuColor 250 छ
किन डाकू Dubrovsky थियो? गैर-तुच्छ कथा, ए Pushkin द्वारा वर्णन
के "ibuprofen" (ट्याब्लेट)? "Ibuprofen" - एक जेल, मलम, निलम्बन: निर्देश पुस्तिका, समीक्षा। "Ibuprofen" (बच्चाहरु को लागि सिरप): प्रयोगको लागि निर्देशन
रूसी सेना मा conscription गर्न मनोवृत्ति